“Madax duubte dooni mayno, daryeel & difaac baan doonaynaa, dulmigana waanu diidan nahay” Banaanbax Galkacyo. – Radio Daljir
“Madax duubte dooni mayno, daryeel & difaac baan doonaynaa, dulmigana waanu diidan nahay” Banaanbax Galkacyo.
Galkacyo, Feb 20 – Banaanbax balaaran ayaa maalintii 2-aad ka dhacay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug.
Banaanbaxa oo ujeedadiisu ay ka duwan tahay kii shalay, ayna isugu soo baxeen dad aad uga badan kuwii shalay mudaaharaaday, ayaa lagu wajahaya amniga Galkacyo iyo colaada ka aloosan gobollada Sool & Cayn.
Dadka mudaaharaaday ayaa ka cabanayey amni xumada ka jirta magaalada Galkacyo oo ay sheegeen in uu gaaray heerkii ugu xumaa, waxna aan laga qaban.
“Waxaa la dilay wasiiro, xeer ilaaliyayaal maxkamadeed, garyaqaano, nabadoono, ganacsato, iyo wax garad, cid loo qabtay miyaad garanaysaan?” ayaa uu yiri banaanbaxe ka hadlay ammaan darida ka jirta magaalada Galkacyo.
Gobollada Sool & Cayn
Banaanbaxayaasha ayaa sidoo kale ka hadlay gulufka colaadeed ee ka aloosan gobollada Sool & Cayn oo banaanbaxayaashu ay sheegeen in dawlada Puntland ay gabtay kaalintii kaga aadanayd.
Dawlada Puntland ayay ku eedeeyeen in ay albaabada ka xiratay gobollada Sool & Cayn, ayna siyaasad ahaan ay raali ka tahay in gobolladaasi ay u gacan galaan Somaliland.
Mudaaharaadka maanta ka dhacay Galkacyo ayaa la jaanqaadaya mudaaharaad kale oo ka dhacay maanta Garowe oo lagu dhaliilay kaalinta dawlada Puntland ee colaada gobolka Cayn.
Gelinkii hore ee maanta ayaa dagaal khasaare lixaad leh gaystay uu ku dhex maray meelo ka mid ha gobolka Cayn ciidamo beeleedka gobolka Cayn iyo ciidamada Somaliland ee fariisimada ka samaystay gobolka Cayn.
Mudaaharaadkii shalay ayaa lagu diiday heshiiska dawlada Puntland ay la gashay Galmudug oo lagu macneeyey mid aan laga tala-gelin shacabka gobolka Mudug, danna aan ugu jirin.